Ukuhlolwa Komsebenzi - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Wonke amabhodi azohlolwa ngo-100% ngokusebenza eFumax factory. Ukuhlolwa kuzokwenziwa ngokuqinile ngokwenqubo yokuhlolwa kwamakhasimende.
Ubunjiniyela bokukhiqiza beFumax buzokwakha uhlelo lokuhlola lomkhiqizo ngamunye. Umdlalo wokuhlola uzosetshenziselwa ukuhlola imikhiqizo ngempumelelo nangendlela efanelekile.
Umbiko wokuhlola uzokwenziwa ngemuva kokuhlolwa ngakunye, futhi kwabelwe ikhasimende nge-imeyili noma ifu. Ikhasimende lingabuyekeza futhi lilandelele wonke amarekhodi okuhlola ngemiphumela ye-Fumax QC.
I-FCT, eyaziwa nangokuthi Ukuhlolwa Okusebenzayo, imvamisa ibhekisa esivivinyweni ngemuva kokuthi i-PCBA ivulwe. Imishini ye-Automation FCT isuselwa kakhulu ekwakhiweni kwehardware evulekile nokwakhiwa kwesoftware, okunganwebisa kalula i-Hardware futhi kusungulwe ngokushesha futhi kalula izinqubo zokuhlola. Ngokuvamile, ingaxhasa izinsimbi eziningi futhi ingalungiswa kalula ngokufunwa. Kumele futhi ibe namaphrojekthi wokuhlola ayisisekelo acebile ukunikeza abasebenzisi isisombululo somhlaba wonke, esiguquguqukayo nesimiselwe ngezinga elikhulu ngangokunokwenzeka.
1. Yini i-FCT ifaka?
I-Voltage, yamanje, amandla, isici samandla, imvamisa, umjikelezo womsebenzi, isivinini sokujikeleza, ukukhanya kwe-LED, umbala, ukulinganiswa kwesikhundla, ukuqashelwa kwezinhlamvu, ukuqashelwa kwephethini, ukuqashelwa kwezwi, isilinganiso sokushisa nokulawula, ukulawula ukukala kwengcindezi, ukulawula ngokunemba kokunyakaza, i-FLASH, i-EEPROM izinhlelo ezenziwa online, njll.
2. Umehluko phakathi kwe-ICT ne-FCT：
(1) I-ICT ikakhulukazi isivivinyo esimile, ukuhlola ukwehluleka kwengxenye nokuhluleka kwe-welding. Kwenziwa ngenqubo elandelayo yokushisela ibhodi. Ibhodi elinenkinga (njengenkinga yokushisela emuva nokujikeleza okufushane kwedivayisi) lilungiswa ngqo kulayini wokushisela.
(2) Ukuhlolwa kwe-FCT, ngemuva kokunikezwa kwamandla. Ezingxenyeni ezingashadile, amabhodi wesekethe, amasistimu, nokufaniswa ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusetshenziswa, hlola indima esebenzayo, njengamandla kagesi webhodi lesifunda, amandla asebenzayo, amandla okulinda, noma ngabe i-chip chip ingafunda futhi ibhale ngokujwayelekile ngemuva kokuvula, Ijubane ngemuva kokuthi amandla enjini avulwe, ukumelana nokugcina amandla kwesiteshi ngemuva kokudluliswa kwamandla, njll.
Ukufingqa, i-ICT ithola ikakhulukazi ukuthi izingxenye zebhodi lesifunda zifakwe kahle noma cha, kanti i-FCT ithola ikakhulukazi ukuthi ibhodi lesifunda lisebenza ngokujwayelekile.